मेरो जीवन कम्युनिस्टले बिताउनुपर्ने आदर्श जीवनभन्दा आज पनि फरक छैन... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
मार्क्सवाद र त्यसबाट निर्देशित लेनिनवाद र माओवादले विश्वभरीकै आम जनतालाई उपनिवेशवादबाट मुक्त गराउन र राजा-रजौटाहरुलाई फाल्न अचूक रणनीतिहरु दिएकै हो । जनयुद्धको माध्यमले नेपाली आम जनताले पनि यसको सफल उपयोग गरेकै हो । नेपालमा भएको पछिल्लो युगान्तकारी क्रान्ति र त्यसपछि संविधान निर्माणमार्फत् भएका प्रगतिशील र अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको एक प्रमुख नेताको हैसियतले मैले देशलाई भन्नैपर्छ- एउटा युग सिध्याई देश अब अर्को युगमा प्रवेश गरेको छ । संविधानबाटै अब हामीले देशलाई ‘समाजवादोन्मुख राष्ट्र’ को रुपमा परिभाषित गरिसकेका छौं । लामो अवधिको कम्युनिष्ट आन्दोलन एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने देशलाई एक गणतन्त्र बनाउने मेरो जीवनको प्रथम उद्देश्य पूरा भइसकेको छ । अबको आवश्यकता आर्थिक विकास हो, सबै नेपालीको समृद्धि हो ।
अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, ‘what got you here will not take you there’ अथवा जुन कुराले तिमीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो, त्यसैले तिमीलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउँदैन ।) मेरा सहयोद्धाहरुले बुझ्नैपर्ने हुन्छ, शास्त्रीय कम्युनिज्मले अब हामीलाई हाम्रो नयाँ गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका सिद्धान्तहरु, क्रान्तिपछिको आर्थिक विकासको लागि अपुग भएको संसारको विकासको इतिहासले बारम्बार पुष्टि गरेको छ । चीन र रुसजस्ता कम्युनिष्ट मुलुकहरुले पनि समयको यहि मागलाई बुझ्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरेको आज दशकौं भैसक्यो। हामीले पनि नविन सोच, नयाँ राजनीतिक र आर्थिक विचारधारा निर्मित गर्नैपर्छ। शास्त्रीय कम्युनिज्मलाई एउटा राजनीतिक ब्रान्ड बनाई आफ्नो र आफ्न आसेपासेको जीवन धान्ने केही अल्पज्ञानी राजनीतिज्ञहरुले यस सत्यलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो सत्ताको खेल मात्रै खेली राख्ने यी राजनीतिज्ञहरुले नेपाललाई माया गर्ने र देश विकासमा रात दिन खट्ने लाखौं आम कम्युनिस्ट, माओवादी कार्यकर्ता र आम जनतालाई यस शाश्वत सत्यबाट विमुख राख्न विभिन्न झुठो तर्कहरु राख्दै आएका छन् ।
नेपाललाई चाहिने नयाँ विचारधारा ‘वाम लोकतन्त्र’ हो । विचार पुर्‍याउनु होला, ‘वाम’ भनेको कम्युनिष्ट मात्रै हैन । समाजवादलाई अङ्गीकार गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरु ‘वाम’ हुन् । नयाँ शक्तिले वाम लोकतन्त्रको मान्यतालाई पार्टी स्थापनादेखिनै अघि सारेको छ । वाम लोकतन्त्र विचारधारा अङ्गीकार गर्न स्वीकार गरेजस्तो महसुस भएपछि मात्रै मैले एमाले र माकेसँग एकता गर्ने प्रस्तावसँग जोडिन पुगेको थिएँ । तर यी दुई पार्टीका नेतापछि शास्त्रिय कम्युनिस्ट विचारधारालाई नै अघि सार्ने मनसाय प्रकट गरेपछि मैले पछि हट्नुको कुनै विकल्प नरहेको अवस्था आएको हो । म आज पनि ‘वाम लोकतन्त्र’ मान्ने राजनीतिक शक्तिहरुसँग हातेमालो गर्न तयार छु, प्रयासरत छु । नेपाली कांग्रेससंगको मेरो चुनावी सहकार्य पनि देशकै पुरानो पार्टी भविष्यम़ा बीपी कोइरालाको ‘समाजवाद’ अर्थात् ‘वाम लोकतन्त्र’ तिर अझै मजबुतिका साथ अगाडी बढ्ला भने आशाले गरिएको हो । मैले बाटो बिराएको होइन, देशको प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरुलाई वाम लोकतन्त्रको बाटोमा ल्याउने प्रयासमा लागेको हुँ ।
कार्ल मार्क्स आज पनि मेरो हिरो, मेरो जीवनको एक आदर्श पुरुष हुनुहुन्छ र सदैव रहनुहुनेछ । मेरो जीवन कम्युनिस्टले बिताउनुपर्ने आदर्श जीवन भन्दा आज पनि फरक छैन र कहिले पनि फरक हुने छैन । एउटा साधारण कोठामा बस्छु, एउटा साधारण खाटमा सुत्छु । मैले सम्पति आर्जन गर्न कहिले लागिनँ, कहिले लाग्दिनँ । कुनै दुराचार गर्दिनँ । आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने, माओवादी भन्ने नेताहरुको चरित्रलाई पनि केलाएर हेर्नुहोला । के तिनीहरु साँच्चै नै कम्युनिस्ट हुन् ? बढी भन्दिनँ । यती नै भन्छु, झूठा कम्युनिस्टहरुसंग सतर्क रहनुहोला ।
(‘बाबुराम भट्टराईको साथमा युवा’ फेसबुक समूहद्वारा विहीबार बिहान डा. भट्टराईसँग गरिएको स्काइप अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश । कुराकानी ‘के बाबुरामले साँच्चै कम्युनिज्मको परित्याग गरेकै हुन् र के बाबुरामले कार्ल मार्क्सलाई आदर्श पुरुष नमानेकै हुन् ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको उक्त फेसबुक समूहले बताएको छ) – साझा पोष्टबाट